स्वस्थ रहने केहि सजिलो टिप्सहरु - ज्ञानविज्ञान
स्वस्थ रहने केहि सजिलो टिप्सहरु
५. दिसाका लागि निश्चित समय बनाऔं । दिसा गर्दा जोड वा बल गरेर गर्ने नगरौं । दिसा गरिसकेपछि गुदद्वार १०–१५ पटक सङ्कुचन गर्ने गरौं।
केहि भाग तपाईंको स्वास्थ्य तपाईंकै हातमा नामक पुस्तक बाट
Don't Miss it यस्ता छन फर्सीका फाइदाहरु
Up Next मिर्गौलाको पत्थरी के हो ? लक्षणहरु, खान हुने र नहुने कुराहरु र यसको उपचार
तरकारीका रूपमा प्रयोग गरिने च्याउका फाइदाहरु जान्नुहाेस्
हामीले च्याउलाई अधिकतम तरकारीका रुपमा प्रयोग गरिने गर्छौं । च्याउले हाम्रो खानामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन र खनिज पदार्थ प्रदान गर्ने…